काभ्रेपलाञ्चोकमा रासायनिक मलको अभाव
काभ्रेपलाञ्चोकमा रासायनिक मलको अभाव हुन थालेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लि धुलिखेलका प्रमुख अशोक खड्काले झण्डै दुई सातादेखि डिएपी मलको अभाव भएको जानकारी दिँदै ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद भएको मल भारतको कोलकातामा रोकिएको बताएका...
सरकारले अब कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कारवाही गर्ने
काठमाडौं । तपाईंले आफ्नो स्वामित्वको कृषियोग्य जग्गा बाँझो राख्नु भएको छ ? त्यसो हो भने अब त्यसमा केही न केही उब्जनी गर्ने गरी तयारी थाल्नुस् । सरकारले अब कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कारवाही गर्ने...
समाजशास्त्रमा डिग्री गरेका दम्पती व्यवसायिक गाईपालनमा
नेपालगन्ज । ‘धेरै पढेका मान्छे गोठालो भएर बसेका छन् ।’ बाँके कोहलपुरका विष्णु पोख्रेल र शारदा पोख्रेलका विषयमा छरछिमेकले लख काट्ने शब्द हुन् । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्म शिक्षा हासिल गरेका पोख्रेल दम्पतीले आठ वर्षदेखि गाईपालन...
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम को घोषणा
काठमाडौं, जेठ । कृषि क्षेत्रको विकास कार्यमा तीव्रता दिनका सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि विशेष कार्यक्रम भन्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम को घोषणा गरेको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा...
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्ने चर्चा चल्ने गरेको भएपनि यथार्थमा ती कुराहरु हुन सकिरहेका छैनन् । नेपाली कृषि क्षेत्र परम्परागतबाट माथि उठ्नै सकेको छैन भन्दा फरक नपर्ला । हुन त पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरु...
किसानलाई पेन्सन दिन सरकारले आगामी बजेटमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने
काठमाडौं । किसानलाई पेन्सन दिन सरकारले आगामी बजेटमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने भएको छ । कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले ‘किसान पेन्सन फण्ड’का लागि बजेट विनियोजन गर्ने भएको हो । मन्त्रालयगत कार्यक्रमहरुको बजेट टुंगो...
कृषि विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षमा ९२ वटा थप आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने
काठमाडौं/ कृषि विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षमा ९२ वटा थप आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य सकेर अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको...
बिषादी प्रयोग न्यूनिकरण गर्न ग्रामिण तहबाट जागरुक
वेदप्रसाद चौलागाँई प्रमुख बिषादी पञ्जिकरण तथा व्यवस्थापन शाखा ० नेपालमा रासायनिक विषादी आयातको अवस्था के छ ? विगतका बर्षहरु भन्दा अहिले विषादी आयातको मात्रा घट्न थालेको छ । विगतमा रासायनिक विषादी प्रयोगगर्ने किसानहरुमा चेतना अभिबृद्धि भईरहेको छ । हामीले...
एक हजार ७०० जना भूकम्पपीडित किसानलाई पशुचौपाया पाल्ने गोठ बनाउन अनुदान
गोरखाका एक हजार ७०० जना भूकम्पपीडित किसानलाई पशुचौपाया पाल्ने गोठ बनाउन अनुदान रकम दिइएको छ । कम्तीमा तीनवटा पशुचौपाया पाल्दै आएका किसानले गोठ बनाउन आर्थिक सहयोग पाएका छन् । चार करोड ४८ लाख ५० हजारको...
सरकारले ‘एक गाउँ, एक कृषि सेवा प्राविधिक’ कार्यविधि
वैशाख, काठमाडौं । कृषि प्राविधिक अन्गरत जेटीए कोर्स पुरा गरेर जागिर खोज्दै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने करार सेवामा सरकारी जागिरको सुनौलो अवसर छ । सरकारले ‘एक गाउँ, एक कृषि सेवा प्राविधिक’ कार्यविधि अन्तरगत ५...